डा. अरूणा उप्रेती काठमाडौं, २५ पुस
अचेल मधुमेह भएका मानिसहरूले भात कि त कम गरेका छन् वा त्यसको सट्टामा कोदो, फापर आदि खान थालेका छन् । रोग लागेपछि मात्र मानिसले विभिन्न स्थानीय खानाको महत्त्व बुझ्न थालेजस्तो छ ।
पहिले पहिले जिल्लामा खाद्यान्न नभएर मानिसहरू भोकै परेका समाचार आउँथ्यो । खाद्यान्नको मतलब नै हुन्थ्यो । केही वर्षअघि म महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी केही कार्यक्रममका अछाम पुगेकी थिएँ । स्वास्थ्य शिविरमा एक दिन एउटी महिला आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन आइन् । भनिन्, ‘डाक्टर साहेब, एक महिना भयो मेरो मुखमा अन्न गएकै छैन । खानै सक्दिनँ । त्यसैले साह्रै कमजोरी लाग्छ ।’
कर्णालीका जनताले खाद्यान्न पाएनन् र कोदो वा फापर खान थाले भन्ने समाचार आउँछ । केही खान नपाएर आलु÷कोदो मात्र खाएर बसेका छन् भन्ने समाचार पढ्दापढ्दा हामीलाई के अनुभव हुन्छ भने खाना भनेको भात मात्र हो । भात नहुनु भोकमरी हो ।
पञ्चायतकालदेखि यो धारणा चलिआएको हो । कर्णालीका कोदो, फापर, आलु खाएका जनतालाई भात खान सिकाउने ‘इच्छा’ भएको सरकारले हेलिकोप्टरबाट चामल लगेर बाँड्न थाल्यो अनि कोदो, फापर आलु अर्थात् असली खाद्यान्नलाई भातले विस्थापित गर्दै लग्यो ।
यसले गर्दा गहुँ, कोदोलाई खाजा मात्र बनाइदियो । फापरको पिठोको ढिँडो बनाएर खाने भरियाहरू भात खाँदा मात्र ‘खाना खाएको’ भन्ने भए । यसको प्रभावले गर्दा उनीहरूले खानाको चर्को मूल्य तिरेर कम पोषण पाउन थाले ।
तर, अहिले भातबाट मात्र पेट भर्न जरुरी छैन । भातलाई मात्र प्राथमिकता दिने मानसिकताले गर्दा नै हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई कमजोर पारिरहेका छौँ । गाउँमा ‘फापरको रोटी खाने’ भनेर कसैले हामीलाई प्रश्न गरेमा हामी अपमानित महसुस गर्छौं र ‘फापर त गरिबले खाने भोजन हो’ भन्छौँ तर काठमाडौंमा भने यसमा केही परिवर्तन भएको छ ।
‘कोदो र फापर खाए हैसियत कम हुन्छ’ भन्ने विचार त्याग्नुपर्छ । वास्तवमा हेर्ने हो भने जौ, कोदोको पिठोलाई हेप्ने हामी जब टीभीमा कुनै खाना पोषणयुक्त भनेर आउँछ, त्यसलाई एक किलोको ७०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य तिर्छौं ।
‘कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा पाउन, फलानो बिस्कुट खानुहोस्’ भनेर कसैले सल्लाह दिँदा तपाईं जब महँगो बिस्कुट किन्नुहुन्छ, त्यो बिस्कुट जौले बनेको हो कि ? विचार गर्नुपर्छ ।
जुनजुन कुरा ‘स्वास्थकर’ भनेर बढी मूल्य तिरेर बजारबाट किनिन्छ । त्यसमा कोदो, फापर, जौ आदि हामीले ‘हेपेका’ खानेकुरा हुन्छन्, जसलाई राम्रो प्याकेटमा राखेपछि त्यसको मूल्य दशौँ गुणा बढी तिर्न तयार हुन्छौँ ।
अहिले केही घरमा गहुँको भातको सट्टामा कोदोको रोटी, दलिया खाने चलन आएको छ । तर, धेरैजसो चाहिँ रोग विशेषको कारणले यस्तो प्रयोग हुन्छ । भातबाहेक अरू पनि अन्न हुन्छन् र भात नखाँदैमा अस्वस्थ भइँदैन, चामल नभए अनिकाल हुँदैन । कोदो र फापर छ भने त्यही पूर्ण भोजन हो भनेर हामीले बुझे त कर्णालीको ‘अनिकाल’ कम हुन्थ्यो, हामीले स्वास्थ अन्न खाने थियौँ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २५, २०७६, १३:३५:००